Soo dejisan 7-Zip 16.04 – Vessoft
Soo dejisan 7-Zip
7-Zip – software ah in ay cadaadin ku files of noocyo kala duwan. software The taageertaa qaabab weyn ee archives oo la shaqeeya ay format 7z u gaar ah. 7-Zip bixisaa riixo ah file sare ay sabab u tahay isku geynta a riixo gaar ah. software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan archives is-unpacking for format 7z ah. 7-Zip falgala sahamisa ee nidaamka qalliinka iyo ku jira tababare file dhisay-in. software waa ay awoodaan in ay sir ama loo ilaaliyo kaydka by password a.
Taageerada ugu qaabab waaweyn
riixo file Sare
Falgala sahamisa ee nidaamka qalliinka
7-Zip Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... WinRAR 5.40
English, Українська, Français, Español... Maxthon Cloud Browser 4.4.8.2000 iyo 4.9.3.200 beta; Standard iyo Portable